Kabarin-Ravalomanana Marc : FANAVAOZANA SY NY FANAMAFISAN’ ORINA NY ANTOKO TIM · déliremadagascar
Kabarin-Ravalomanana Marc : FANAVAOZANA SY NY FANAMAFISAN’ ORINA NY ANTOKO TIM
politique	 26 février 2020 .
Ianareo mpitarika ato anatin’ny antoko TIM
Ny voalohan-teniko dia ny fisaorana an’Andriamnitra lehibe nohon’ny nanomezany antsika tombon’andro indray ka ahafantsika mihaona eto amin’ity toerana ity. Hisaorana ihany koa izy nohon’ny fitsimbinany, indrindra ianareo avy lavitra ka tonga soamantsara eto Antananarivo. Hirariana lalndava ihany koa ny hiverenanareo soamantsara any antokan-tranonareo tsirairay avy rehefa vita ny dinika izay atao eto.
Zava-dehibe tokoa ity fotoana ity ho antsika ato amin’ny antoko, indrindra ho anareo tompon’andraikitra isan’ambaratongany sy ny olomboafidy rehetra. Araky ny efa fantatrareo dia natao ity fivoriana ity mba hanavaozana, sy hanamafisan’orina mba miroso amin’ny redynamisation izany. Izany redynamisation izany dia tsy vita indray andro akory satria misy ireo dingana tsy maintsy arahina. Tsy vitan’ny fanolona olona fotsiny izany fa tsy maintsy jerena daholo ireo tsy mety izay mila fanarenana ary mitaky ihany koa fiovana eo amin’ny fomba fanao na fomba fihetsikin’ny tsirairay na changement de comportement izany. Fanombohana ihany ny antsika androany. Fotoana izao, satria efa manana ivo-toerana fampiofanana isika ao amin’ ny Foibe
Ny zavatra tsapa aloha dia tsara fanombohana isika amin’izany satria dia hita tokoa ny hafanam-pon’ireo mpikambana avy any amin’ny faritra rehetra satria dia voatery notohanam-potsiny ny maro taminareo. Fisaorana lehibe tokoa no atolotra anareo rehetra, indrindra ianareo izay nanampikasana ho avy kanefa dia voatery najanona satria mbola ireo tompon’andraikitra aloha no nantsoina androany. Ny hirariana dia ny hitohizan’izany hafanam-po ny tsirairay izany mandritry izao fotoana hanomezana aina vaovao ny antoko izao. Isaorana ihany koa ianareo rehetra tonga eto fa dia hita porofo tokoa fa matanjaka ny antoko.
Araky ny efa fantatrareo dia nisy ny fanavaozana amin’ny ampahany ny birao nasionaly mba ahafahana manao ny redynamisation. Koa faly aho manolotra anareo ny Sekretera Jeneraly vaovao vao notendrena dia Rina Randriamasinoro izany. Tsy zovina ho antsika intsony izy, indrindra ho anareo eto andrenivohitra. Izy moa no kandidantsika ho ben’ny tanàna teto Antannaarivo. Ny olona voatendry faharoa dia ny Solombavambahoaka Fidèle Razara Pierre izay ho Mpandrindra ny serasera ny antoko. Izy moa dia mpanao gazety ihany koa ka inoana fa manana ny traikefa amin’izany ary hitarika ny ekipan’ny serasera.
Raha izy roalahy vao notendrena ireo no dinihana dia mazava fa mbola tanora ary ao anatin’ny tena hery izany. Izany hoe afaka manome aina vaovao ny antoko indray ary hanentana ny tanora ihany koa mba hiditra ho mpikambana ato amin’ny antoko. Hanampy azy ireo amin’izany ireo Solombavambahoaka voafidy16 mianadahy. Koa mitso-drano anareo aho eo amin’izao fanamby goavana izay hapetraka aminareo izao. Anisan’ny antoko politika mantajaka eto Madagasikara ny antoko TIM, koa mino aho fa ho tratrantsika ny tanjona
Araky ny voalazako teo dia tsy hoe fanovana rafitra na fanendrena olona fotsiny ny atao redynamisation fa misy dingana maro tsy maintsy arahina. Ilaina ny fanovana ny comportement, ny fifandraisana eo amin’ny mpitarika sy ny mpikambana, ary indrindra ny fanatsarana ny serasera sy ny fampiofanana. Ireo rehetra ireo dia mila hampiharina sy arahimaso ny fanantanterahana azy mba ahafahana manitsy izay tsy mety ary manatsara hatrany. Izay no atao hoe : miasa mafy, miasa tsara mba hitondra tombontsoa ho an’ny rehetra ka ho hankasitrahan’ny vahoaka ny asa sy ny programan’ny antoko.
Tsara ho marihina ihany koa fa ireo rafitra apetraka rehetra any amin’ny faritra dia atao vonjy maika aloha. Ireo rafitra vonjy maika isan’ambaratongany ireo no hametraka ny rafitra maharitra amin’ny alalan’ny fifidianana ataon’ireo mpikambana fototra izany. Izany fametrahana rafitra miainga any fototra izany anefa dia mitaky fanoratana ny anaran’ireo mpikambana tsirairay mba ho fantatra tokoa ireo mpikambana afaka mifidy fa tsy hisy sanatria an’izany mpikambana milatsaka ho fidiana ka hitondra olona hafa na hividy olona amin’ny fifidianana ireo tompon’andraikitra isan-karazany ireo.
Noho izany dia tsy maintsy apetraka sy hamafisana tsara ny disciplines eto amin’ny antoko ka hanaraka izany daholo ny tsirairay. Io fanarahana fitsipika io tokoa no ahafantarana ny antoko ary beazana amin’izany isika rehetra fa tsy misy zavatra ho vita raha tsy misy io. Izany koa dia mitaky ny atao hoe éthique politika. Isika mpikambana ato amin’ny TIM dia manana ny fotokevitra hijorantsika ka ny rehetra tokony hanaraka izany. Ireo izay tsy voafidy amin’ireny rafitra hapetraka ireny dia tokony hanaja ny vokatra sy izay mpikambana lany eo fa tsy hiala amin’ny antoko na hitarika an’ireo mpikambana hafa hifindra antoko hafa. Izany no atao hoe demokrasia ka isika ato anatiny no tokony hanaja izany demokrasia izany voalohany. Ireo mpikambana mihevitra ny tsy mankatò izany dia azo lazaina fa tsy mikatsaka ny tombontsoan’ny antoko fa mikatsaka ny tombontsoan’ny tenany manokana. Ireny olona ireny izany dia manana sady tsy manaja ny atao éthique politika. Ankoatr’ireo dia efa manana ny maha izy azy ny antoko, indrindra eo amin’ny fijoroana amin’ny fahamarinana sy ny fitsinjovana ny tombontsoam-bahoaka.
Amin’ny maha antoko mpanohitra antsika dia tena andraikitra manokana ho an’ny antoko ny mitsikera ireo tsy fanarahan-dalàna rehetra na ihany koa ny tsy fijerena ny tombontsoam-bahoaka izay ataon’ny fitondrana. Noho izany dia tsy ny mpitarika eto Antananarivo irery no misahana an’izany fa andraikitra ankinina amin’ny mpitarika ny antoko isan’ambaratongany rehetra izany.
Tsy maintsy mijoro isika mitsikera ny mpitondra amin’ny tsy fanajana ny tany tan-dàlana ka ao anatin’izany ny tsy fanitsakitsahina ny lalampanorenana. Tsy maintsy miady isika amin’ny fametrahana ny demokrasia tena izy ary ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana. Tsy ekentsika ihany koa ny tsy fanajana ny zon’olombelona ataon’ny mpitondra. Ireo voalaza rehetra ireo no miantoka ny stabilité politika eto amin’ny firenena sy ny fifampidimbiasam-pahefana ao anatin’ny filaminana.
Ny hafatra hapetrako ho anareo rehetra dia hajao ny toromarika omen’ireo ekipa hiandraikitra izany redynamisation ny antoko izany. Hamafiso sy araho hatrany ny disciplines na ny fitsipi-pifehezan’ny antoko, hapetraho sy hajao ny ethique amin’ny maha mpikambana ny antoko TIM anareo fa aza mety ho voarebirebin’ny sasany. Mahaiza ihany koa anefa mifankatia mba hanjaka ny esprit de solidarité eo amin’isika rehetra. Ianareo tompon’andraikitra rehetra, mahaiza ihany koa ianareo mihaino ny feon’ny mpikambana any amin’ny fototra.
Mamporisika anareo ihany koa hijery manokana ny tanora sy ny vehivavy mba ho tonga maro izy ireo hanatevin-daharana ny antoko. Izy ireo no maro an’isa eto amin’ny firenena ka tokony ho hita taratra eo amin’ny mpikambana ihany koa izany.
Ny antoko TIM dia natao ho an’ny Malagasy rehetra, koa ianareo izay efa niaraka taminay taloha ka tapakevitra ny hiverina andaharana indray, manantena izahay fa fantatrareo tsara izao fa tsy manavaka ny antoko ary mikatsaka hatrany ny tombontsoan’ny besinimaro. Misokatra hatrany ny varavarana ny antoko rehefa samy vonona isika fa hanaraka ny disciplines ary hanaja ny éthique politique ka sahy hijoro hanandratra hatrany ny hasin’ny antoko TIM ary ny tombontsoam-pirenena.
Homba antsika rehetra Andriamanitra